Viralheat - အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်လူမှုမီဒီယာစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, ဇန်နဝါရီလ 1, 2012 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 10, 2016 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုရှယ်မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုအချိန်အတော်ကြာကတည်းကစောင့်မျှော်နေခဲ့ရသည်။ လူမှုမီဒီယာစောင့်ကြည့်မှုစနစ်ကသင့်အားအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်သော့ချက်စာလုံးများကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်ထိုဖော်ပြချက်များနှင့် ပတ်သတ်၍ ဖော်ပြချက်များ၊ ကုမ္ပဏီများအတွက်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းမဟာဗျူဟာသည်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုပြissuesနာများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ သင်၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ပတ်သက်၍ လူတို့အပေါ်မည်သို့သဘောထားသည်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်သင်၏လူမှုရေးနည်းဗျူဟာများမည်မျှကောင်းမွန်စွာဆောင်ရွက်ခြင်းကိုအလွန်အကျိုးရှိသည်။
ပြsystemsနာမှာဤစနစ်များ၏မယုံနိုင်စရာကုန်ကျစရိတ်ပါ! ဆိုရှယ်မီဒီယာမဟာဗျူဟာကိုပြန်လည်ရယူရန်အတွက်အချိန်ယူရသည့်အတွက်လစဉ်ဒေါ်လာထောင်နှင့်ချီသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုကို ၀ ယ်သူတစ် ဦး ကိုပြောရန်အလွန်ပင်ခက်ခဲသည်။ ငါဆိုရှယ်မီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေသူများအတွက်“ ငါကတတ်နိုင်တဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေးပလက်ဖောင်းရှိလား။ နှင့်များစွာသောတုံ့ပြန်မှုမရကြဘူး။
သို့သော်တ ဦး တည်းတုံ့ပြန်မှု Carri Bugbee ဖြစ်သည် ငါ့ကိုအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားရှိပါတယ်။ Viralheat အားကောင်းတဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုစောင့်ကြည့်နေပုံရတယ် analytics အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးဈေးကွက် (SMB) အတွက်တည်ဆောက်ထားသည့်ပလက်ဖောင်း။
ငါစတင်သုံးစွဲဖို့စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ် Viralheat ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများ၏ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုစတင်လေ့လာရန် စနစ်သည်စာရင်းများစွာပါ ၀ င်သောကြောင့်အတော်လေးအားကောင်းသည်။
အချိန်နှင့်တပြေးညီစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း - ဒါကသော့ချက်လက္ခဏာပါ။ အခြားစနစ်များစွာသည်အခြားစနစ်များမှအချက်အလက်များကိုစုစည်းရုံမျှဖြင့်အချိန်နှင့်တပြေးညီမဟုတ်ပါ။
ဗွီဒီယိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း 200 ကျော်ဗီဒီယိုက်ဘ်ဆိုက်များ၏။
CRM ပေါင်းစည်းမှု Excel မှတဆင့် Salesforce သို့ download ချနိုင်သည်။
Geo တည်နေရာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာ၌မဆိုသင်၏ပရိုဖိုင်းများကိုကန့်သတ်နိုင်ခြင်း။
Dynamic သတိပေးချက် သင်ဖော်ပြချက်အပေါ်ချက်ချင်းအကြောင်းကြားစာကိုရရှိရန်နိုင်အောင်စွမ်းရည်။
API ကို - ဒါကြောင့်သင်လိုချင်သောမည်သည့်ပြင်ပစနစ်နှင့်မဆိုဒေတာကိုပေါင်းစည်းနိုင်သည်။
အပြင် features တွေအပြင်၏အထင်ရှားဆုံးရှုထောင့် Viralheat စျေးနှုန်းဖြစ်နိုင်သည်။ သူတို့၏အဖွင့်အစီအစဉ်သည်တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၉.၉၉ ဖြစ်ပြီးအခြေခံအင်္ဂါရပ်များဖြင့်ဖြစ်သည်။ တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၂၉.၉၉ ပါသောအထုပ်တစ်ခုသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်တစ်ခုစတင်ရန်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးရှိသည်။ တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၈၉.၉၉ ကျသင့်မည့်အထုပ်တွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အေဂျင်စီအထုပ်တစ်ခုပါရှိသည်။
စျေးနှုန်းအတွက်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သောအားကောင်းသောလူမှုမီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ SMBs အတွက်ဆိုရှယ်မီဒီယာစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းဆိုင်ရာပလက်ဖောင်းများသင်သိလျှင် (ဆိုရှယ်မီဒီယာထုတ်ဝေခြင်းမဟုတ်) မှတ်ချက်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။ ထို့အပြင် - သင်သည်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်ပါက Viralheatစနစ်အပေါ်သင်၏အကြံအစည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကြားချင်ပါသည်။ ငါတို့အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်၊ ငါတို့ကတွဲဖက်တဲ့အထုပ်တစ်ခုအတွက်စာရင်းသွင်းခဲ့တယ် (ဒီဟာကဒီစာမူထဲမှာပါတဲ့ link တွေပါ) ။
Tags: geo တည်နေရာကိုစောင့်ကြည့်geosocial စောင့်ကြည့်မှုသြဇာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုစိတ်ဓါတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလူမှုရေး CRM ပေါင်းစည်းမှုလူမှုမီဒီယာလူမှုမီဒီယာသတိပေးချက်များလူမှုမီဒီယာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုလူမှုမီဒီယာစောင့်ကြည့်ဗီဒီယိုကစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုဗိုင်းရပ်စ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဗိုင်းရပ်စ်
အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်အဆက်အသွယ်များကိုစီမံရန်အတွက် Software ကိုမည်ကဲ့သို့အသုံးပြုသည်
Carri Bugbee ဖြစ်သည်
ဒီဇင်ဘာ 10, 2012 မှာ 12: 55 AM
Doug, ငါ SMBs များအတွက်ဆိုရှယ်မီဒီယာစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး tools တွေကိုသုတေသနပြုခြင်းအားဖြင့်ရှာတွေ့သောကြောင့်, သင်၏ post ကိုမြင်သောအခါငါတက်အက်။ ထိုအခါငါသင်၏ post ၌ငါ့နာမကိုမြင်တော်မူ၏။ ကြွေးကြော်သံအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါက startups နှင့် SMBs များအတွက်တတ်နိုင်သောစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးကိရိယာအသစ်များကိုအမြဲရှာဖွေသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ငွေအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာဖြစ်နေသေးပုံရသည်။ ငါအလားတူအရာတစ်ခုခုကိုတွေ့လျှင်, ငါသင်သိစေရန်အတွက် pop ပါလိမ့်မယ်။
ဒီဇင်ဘာ 10, 2012 မှာ 12: 58 AM
ကျေးဇူးပြု၍ @CarriBugbee: disqus! ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောသဘောတူညီချက်ရရှိရန်လိုအပ်နေသေးသည်။ (ကျေးဇူးတင်ပါသည်!) - Viralheat သည်သူတို့၏ပလက်ဖောင်းကိုဆက်လက်တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်နေသည်။